Lix Arimood uu La Gaar ahaa Shirweynaha ay Qabsadeen Al-Shabaab. (Qore C/Casisi X/Xuseyn) – Shabakadda Amiirnuur
Lix Arimood uu La Gaar ahaa Shirweynaha ay Qabsadeen Al-Shabaab. (Qore C/Casisi X/Xuseyn)
March 30, 2020 4:19 pm by admin Views: 127
23-kii Rajab 1441H, waxaa soo gabagaboobay shir socday muddo 5 maalmood ah oo ay qabatay Xarakada Al-Shabaab, kaasoo lagu marti qaaday dad kor u dhaafaya 100-xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameed, culimo iyo qaar kamid ah madaxda Al-Shabaab sida ay shaaciyeen warbaahinada kooxda taageera, laguna baahiyey baraha bulshada.
Qormadan kooban ugama hadli doono shirkaas, go’aanada kasoo baxay iyo ujeedka laga lahaa, balse waxaan ku hogotusaaleyn doonaa 6-qodob oo aan isleeyahay wuu la gaar ahaa shirkii Al-Shabaab.
1. Wuxuu Qabsoomay Xilli Laga Walaacsan yahay CoronaVirus
Arinta kale ee xusida mudan ayaa ah in gundhigga iyo aasaaska go’aanada kasoo baxay shirka ay ahaayeen kitaabka iyo sunaha, taas oo ah mid ka duwan shirarka ay qabsadaan madaxda dowlada Federalka kuwaas oo go’aamadooda lagu saleeyo xeerarka qaramada midoobay iyo qawaaniinta caalamiga ah.
Fu’aad Maxamad Khalaf oo uu Mareykanku ku baadigoobayo abaalmarin dhan 5 milyan oo dollar oo la siinayo qofkii xogtiisa keena ayaa ka dhex muuqday sawirada la baahiyey.
Bilihii u dambeeyey diyaaradaha mareykanka ayaa duqeymo lixaad leh ku hayey deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab, warbaahinta ayaa dhankeeda waxey hadal heysay in ururku uu wajahayo cadaadisyo militari oo sababay inuu u firxado dhanka hawdka. Balse shirka ayaa muujiyay in kooxdu weli awood u leedahay iney abaabusho shirar u dhigma heer caalami, kulmiso xubno ka badan 100, ku dhawaad mudo todobaad ahna ay si nabadgelyo ah uga tashadaan waxa ay ugu yeereen “aayaha muslimiinta ku dhaqan bariga afrika”. Taas oo ka dhigeysa al-Shabaab koox aan la saadaalin karin qorshaha u degsan iyo go’aanada ay qaadanayaan.
Waxyaabaha uu la gaarka ahaa shirweynaha Al-Shabaab waxaa kamid ahaa in aysan kasoo qeybgalin dumar iyo ururada bulshada rayidka ah, taas oo xoojinaysa aragtida aan kor kusoo xusnay ee ah in gundhiga shirka lagu saleeyay mabaad’ida islaamka. Xeerarka caalamiga ah ayaa xadiday saamiga dumarku ay ku leeyihiin ka talinta aayaha bulshada ay ka tirsan yihiin. Balse Alshabaab ayaan gebi ahaanba ictiraafsaneyn xeerarka caalamiga ah.
Ugu dambeyn, waxaan oran lahaa Xarakada Al-Shabaab waxay buuxisay firaaqii dowladnimo ee kajiray wadanka, waxay nabad kusoo dabaashay deegaanada ay ka taliso, waxay dhistay maamullo bixinaya adeegyada aasaasiga ee bulshadu u baahan tahay, garsoor hufan oo dadka cadaalad ku maamula sida ay qirsan yihiin dowladaha iyo hay’adaha dagaalka kula jira oo ay ugu horeeyaan UN-ka iyo xitaa taliska ciidamada Mareykanka ee Africa (AFRICOM). Maamulada Al-Shabaab waxa uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyaa bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka arimiyaan, arintaas oo ah mid banaanka soo dhigtay awoodooda maamul iyo inay leeyihiin karti ay ku hogaamiyaan siyaasada wadanka.